आज पनि सुनको मूल्य ओरालो - नेपालबहस
गृहपृष्ठ › अर्थ/व्यापार › सुनचाँदी ›
आज पनि सुनको मूल्य ओरालो
| १३:०१:२४ मा प्रकाशित
५ मंसिर, काठमाडौं । सुनको मूल्य आज पनि ओरालो लागेको छ । बिहीबारको तुलनामा आज पहेंलो धातुको मूल्य प्रतितोला रु ४०० ले घटेको छ । नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघका अनुसार आज छापावाला सुन प्रतितोला रु ९४ हजारमा कारोवार भएको छ ।
बिहीबार भने प्रतितोला रु ९४ हजार ४०० मा कारोवार भएको थियो । यस्तै तेजाबी सुन प्रतितोला रु ९३ हजार ५०० मा कारोवार भएको छ । बिहीबार तेजाबी सुन प्रतितोला रु ९३ हजार ९०० मा कारोबार भएको थियो ।
यस्तै चाँदी आज प्रतितोला रु पाँचले घटेको छ । बिहीबार प्रतितोला रु एक हजार २१५ मा कारोवार भएको चाँदी आज भने प्रतितोला रु एक हजार २१० मा कारोवार भएको छ ।
आज सुनको मूल्य प्रतितोला २ सयले ओरालो १६ घण्टा पहिले
आज सुन तोलामा तीन सय रुपैयाँले बढ्याे ६ दिन पहिले
सुनको मूल्य प्रतितोला एक हजारले बढ्यो, तोलाको कति ? ३ हप्ता पहिले
मुख्यमन्त्री र पर्यटनमन्त्री लिएर ताप्लेजुङको घुन्सा पुगे प्रधानमन्त्री ओली ५ दिन पहिले
कास्कीको पोखरामा उपचाररत दुई संक्रमितको मृत्यु २ दिन पहिले
जबरजस्ती करणी गर्ने यादव पक्राउ ४ दिन पहिले
गोरखाका ११ स्थानिय तहलाई ग्लोबल गोरखा समाजबाट स्वास्थ्य सामाग्री सहयोग २ दिन पहिले
कालिकोटको पलाता गाउँपालिकामा डकैती शैलीमा भ्रष्टाचार, सिडिओ आचार्यसँग छानविनका लागि माग ३ दिन पहिले
सेना, प्रहरी, सशस्त्र र सीआईडीका प्रमुखसँग प्रधानमन्त्रीको छलफल, सम्भावित कदम के होला ? ६ दिन पहिले
धान उत्पादन बढ्यो २ हप्ता पहिले
वाग्मती प्रदेश मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेल कोरोनामुक्त ४ हप्ता पहिले
चुरोट खाँदै गर्दा ‘हेपेको’ भन्दै खुकुरी प्रहार गरी साथीको हत्या ! ३ हप्ता पहिले
तास खेलिरहेका ७ जुवाडे पक्राउ परेपछि गलैँचा पनि बरामद ४ दिन पहिले
बजेटबारे कांग्रेस नेता रिजालकाे टिप्पणी : नेकपा सरकारको असफलता ! ६ महिना पहिले
श्रीमानको हत्या अभियोगमा पुर्पक्षका लागि कारागार चलान ८ महिना पहिले
आहाराको खोजीमा स्याल ५ महिना पहिले